Maamulaha guud ee AdvisorShares wuxuu saadaaliyay sanadka 2020 inuu noqon doono sanad wanaagsan warshadaha xashiishadda • Daroogada Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Maamulaha guud ee AdvisorShares ayaa saadaaliyay in 2020 ay sanad wanaagsan u noqon doonto warshadaha xashiishadda
maqaal by Ties Inc. January 15 2020
In kasta oo ay hoos u sii dhacayaan rajada maal-gashadayaasha maal-galiyaasha ganacsiga xashiishadda, sida uu sheegayo Noah Hamman, oo ah Madaxa Shirkadda AdvisorShares, waxay u noqon kartaa sannadka ugu wanaagsan warshadaha weed iyo maal-gashadayaasha dahabka cagaaran. Maamulaha guud ayaa tan u sharxaya Yahoo Finance.
"Sannadkii hore wuxuu ahaa sannad adag", ayuu yidhi Hamman, oo ka hadlaya 'ganacsigii ugu horreeyay'. "Waxaan qabaa in sanadkan uu aad u fiicnaan doono. Waxaan si gaar ah diiradda u saarnay suuqa xashiishadda Mareykanka ee 2020. " Hamman wuxuu tilmaamay cadaadis uga yimid gudoomiyaha New York Cuomo inuu sharciyeeyo xashiishadda. Soo jeedintiisa waxaa ka mid ah abuurista Xafiiska Maareynta Xashiishadda si uu u nidaamiyo isticmaalkiisa. Intaa waxaa dheer, wuxuu rabaa xashiishadda iyo xarun cilmi baaris marka la gaaro 2020. Cuomo wuxuu rabaa inuu la shaqeeyo Connecticut, New Jersey iyo Pennsylvania si uu isugu duwo nidaamka sharciyeynta isticmaalka xashiishadda dadka waaweyn.
Haddii dadaalka Cuomo uu guuleysto, ma noqon doono waqti dheer ka hor intaan Magaalada New York sharciyeynin marijuana madaddaalada ah. Markay tani dhacdo, suuqa xashiishadda ee New York wuxuu kori karaa $ 2024 bilyan sannadka 1,6, sida ku cad muujinta BDS Analytics. Guddoomiyaha ayaa sheegay in sharciyeynta marijuana ay keeni karto qiyaastii $ 300 milyan oo canshuur ah sanadkiiba.
Sanadkii 2019, qaybta xashiishadda ayaa hoos u dhacday 32%, sida laga soo xigtay shirkadda Mareykanka ee Stifel. Falanqeeyayaasha Stifel ayaa sheegaya in kororka degdegga ah ee warshadaha iyo horumarka gaabis ah ee intaas ka dib ay caqabad ku yihiin waaxda. Rajada laga qabo waaxda xashiishadda sanadkii la soo dhaafay ka dib markay sharciyada sharci-dejinta ee Kanada hoos u dhacday. Shirkadaha ayaa hoos u dhigay magacyo caan ah sida Aurora. Stifel wuxuu sidoo kale farta ku fiiqay hoos u dhac ku yimid ciyaartoy waa weyn sida Canopy Growth (CGC), Aurora, Tilray (TLRY) iyo Cronos (CRON). Maalgashadayaashu waxay rajeynayaan inay horumar gaaraan sanadka 2020.
Hamman wuxuu farta ku fiiqay laba qof oo cusub oo ay tahay inay isha ku hayaan maalgashadayaasha. Waxay ku saabsan tahay Caleenta dhabta ah (TRLFF), oo ah shirkad ka socota Florida oo sii wadata inay kasbato saamiyada suuqa Mareykanka. Isaguba aad ayuu isugu kalsoon yahay Warshadaha Cagaarka Cagaaran (GTBIF).
Shuruucda xashiishadda ee Caasimadda Australia waxay sababtaa jahwareer iyo muran
Orodyahanka cusub miyuu sarreeyaa? 80% ee...
Cunto kariye Talyaani ah ayaa loo xiray xashiishad ay ku jiraan 'cusub